'Cliffhanger' isatvN Saturday-Sunday drama scheduled to air from 2021. This drama tells the story of people who climbamountain, such as those who come to death, those who come to kill, and those who come to save, in the background of the vast and vast unexplored view of Mt. Jirisan, away from th
ENT | MoMo 기자 | 2021-02-25 18:54
Choi Kang-hee x Kim Young-gwang Hello? Me! romance first broadcast on the 17th
KBS2 Wednesday-Thursday drama 'Hello? Me!' starring Choi Kang-hee and Kim Young-gwang isafantasy-growing romantic comedy that tells the story ofa17-year-old who visited me ona37-year-old day when I was struck back and forth likeaflat ball. The romance of 37-year-old Hani, who lives in the no
K-MEDIA | MoMo 기자 | 2021-02-19 20:08
Olivia Rodrigo, ranked first on UK Official Single Chart for5consecutive weeks with 'drivers license'
Olivia Rodrigo's new single, “drivers license,” won the top 100 on the official singles chart right after it was released on the 8th of last month, and succeeded in makingahot shot debut, and has remained at the top for five consecutive weeks.The music video is also attracting high interest worldw
ENT | MoMo 기자 | 2021-02-19 20:06
'You Make Me Dance' --- Your gaze...'ထုတ်လုပ်သူ၊ တတိယအကြိမ် BL web drama
'You make me Dance' ဒရမ်မာသည် မိသားစုရဲ့ အချစ်ကို မရခဲ့သော ရိုးရာခေတ်အကသမားဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ကျောင်းသား Song Shi-on နှင့် အိပ်မက်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ငွေချေးစာချုပ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည့် Hong-seok Jin ရဲ့ အနီရောင်ခေါင်မိုးမှာ အတူတူနေတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခုနှစ် Busan Internation
ENT | Khaing 기자 | 2021-02-17 16:03
최강희X김영광 안녕? 나야! 로맨스 17일 첫 방
최강희, 김영광이 주연을 맡은 KBS2 수목드라마 '안녕? 나야!'는 판타지 성장 로맨틱 코미디로 바람 빠진 공처럼 이리저리 치이던 37세의 어느 날, 17세의 내가 찾아오며 벌어지는 이야기를 다룬다.인생의 비수기를 사는 37살 하니와, 아버지에 막대한 빚을 지고 쫓겨난 재벌 2세, 그리고 한때 잘나가고 지금은 한물 가버린 톱스타의 좌충우돌 로맨스는 이들의 과거 얽히고설킨 인연만큼 질기고 짠내 나는 핑크빛 분위기로 색다른 재미를 안길 것으로 기대된다.한편，그룹 위클리(Weeekly)가 KBS2 새 수목드라마 ‘안녕? 나야!’(극본
TV&MOVIE | 박경수 기자 | 2021-02-16 18:24
China Mango TV 2021 Sisters who make waves season2is back
In this program season 1, 30 female celebrities who have already debuted and have been active recruited, and7female celebrities who were selected by final voting through training camps and contests and formedanew girl group Mr. Priceless (无价之姐).In Season 1, it showed an unforgettable stage to th
ENT | Khaing 기자 | 2021-02-09 20:14
CIX, comeback with the fourth EP album “Hello, Strange Dream”
CIX isafive-member boy group under C9 Entertainment, which debuted on July 23, 2019. The new album “Hello, Strange Dream” is connected to “Hello, Stranger”, “Hello, strange space”, and “Hello, strange time”. It is an album that marks the end of the 'HELLO' series.From the title song 'Cinema' to 'S
K-POP | Khaing 기자 | 2021-02-09 20:10
EXO Xiumin participates in the OST of 'Mr. Queen' after discharge from military
On the 29th, 'Mr. Queen' OST production company Big Ocean ENM said, "The seventh OST of 'Mr. Queen' in which Xiumin participated in the song will be released on the 31st."Xiumin (real name Kim Minseok) enlisted in military service on May 7, 2019. He was the first member of the EXO member to enlist,
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-09 20:04
Mnet 'Kingdom'6team lineup completed
BTOB isa6-member multinational boy group released in 2012 by Cube Entertainment after2years and5months after BEAST. BTOB, who is the artist recognized by the public by releasing representative songs such as ‘It’s Okay’, ‘Remember that’, and ‘Missing you’, expressed ambition to showastage of
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-09 20:03
Keeping Up with the Kardashians Last Season Trailer Revealed
Keeping Up with the Kardashians isareality program that aired on E! from October 10, 2007, to the present. Kim, Kourtney, Khloé Kardashian sisters and their mother Chris. It follows the 24 hours of the Kardashian family, which isafamous family and always carries topics and controversies. This is
ENT | MoMo 기자 | 2021-02-09 19:59
WEi Kim Yohan cute photos released
'Singles',ajoyful lifestyle magazine for confident singles, has unveiled fashion photos of Wei Kim Yo-han,anew ambassador for North Face,aglobal outdoor brand taking the lead in eco-friendly moves.Kim Yo-han participated in Produce X101 and won first place, and then is active asamember of th
ENT | Khaing 기자 | 2021-02-09 19:55
China Mango TV ၂၀၂၁ Sisters who make waves season ၂ ပြန်လာပြီ
ဤအစီအစဉ် season ၁ တွင် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင် ၃၀ ကို စုဆောင်းပြီး၊ နောက်ဆုံးမဲပေးခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲများမှရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် နာမည်ကျော်အမျိုးသမီး ၇ ဦး ကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ girl group Mr. Priceless (无价之姐)ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ရာသီ ၁ တွင် အများပြည်သူများ မမေ့နိုင်သောတင်ဆက်ခြင်းကို ပ
ENT | Khaing 기자 | 2021-02-04 19:48
CIX၊ စတုတ္ထကြိမ်မြောက် EP album “Hello, Strange Dream” ဖြင့် comeback လုပ်ခဲ့သည်
CIX သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သော C9 Entertainment မှ အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ “Hello, Stranger” အယ်လ်ဘမ်ကို “Hello, strange space”နှင့် “Hello, strange time” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည်' HELLO 'စီးရီးများ၏ နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။သီချင်းခေါင်းစဉ်'Cinema' မ
K-POP | Khaing 기자 | 2021-02-04 19:46
Mnet'Kingdom'အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ lineup ရွေးချယ်ခြင်း ပြီးစီးခဲ့သည်
BTOB သည် အဖွဲ့၀င် ၆ ဦး ပါ၀င်သည့် နိုင်ငံတကာမှ ပါဝင်သည့် ယောက်ျားလေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ BEAST ပြီးနောက် ၂ နှစ်နှင့် ၅ လအကြာတွင် Cube Entertainment မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူထု၏ အသိအမှတ်ပြုခံရသော အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့သော BTOB သည် 'It's Okay'၊‘Remember that’ နှင့် ‘Missing you’ ကဲ့သို့သေ
K-POP | Nang 기자 | 2021-02-02 18:14
Keeping Up with the Kardashians ၏ နောက်ဆုံး Season Trailer ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
'Keeping Up with the Kardashians'သည် ၂၀၀၇၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်မှ ယခုအထိ E! TVတွင် ထုတ်လွှင့်သော reality show တစ်ခုဖြစ်သည်။ Kim, Kourtney, Khloé Kardashian sisters နှင့် သူတို့၏ မိခင် Chris။ ၎င်းသည် ကျော်ကြားသောမိသားစုဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာများနှင့် လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများပြားသော Kardashian မိသားစုကို
ENT | MoMo 기자 | 2021-02-02 18:11
WEi Kim Yohan၏ ချစ်စရာကောင်းသော မဂ္ဂဇင်း ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိသော Singleလေးတွေအတွက် ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော လူနေမှုပုံစံ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည့် 'SINGLES' သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကိုက်ညီသော North Face၏ ambassador အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော WEi Kim Yohan၏ မဂ္ဂဇင်း ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်Kim Yo-han သည် Produce X101 တွင် ပါ၀င်ခဲ့ပြီး
K-POP | Khaing 기자 | 2021-01-29 21:38
NCT Jaehyun, first still photo of drama 'Dear.M' released
'Dear.M' (Scripter Lee Seul/Director Park Jin-woo, Seo Joo-Wan) isaKBS2 Friday drama scheduled to air from February 26, 2021,aplaylist-produced web drama, and shares the story of love playlist. 'Dear M' isano retouched no-filter youth romance drama that unfoldsapink blossom while looking for
ENT | Nang 기자 | 2021-01-29 18:29
NCT Jaehyun၊ ဒရမ်မာ 'Dear.M' မှ ပထမဆုံး still ဓာတ်ပုံ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
'Dear.M' (ဇာတ်လမ်း Seul Lee / ဒါရိုက်တာ Park Jin-woo၊ Seo Ju-wan)သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်မှ စပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် KBS2 သောကြာနေ့ စပါယ်ရှယ်ဒရမ်မာဖြစ်ပြီး playlist ထုတ်လုပ်သော web drama မှထုတ်လွှင့်ပြီး love playlist၏ အကြောင့်းကို မျှဝေရန်စီစဉ်ထားသည်။'Dear.M'သည် Seoyeon တက္ကသိုလ်ကို ဇောက်
ENT | Nang 기자 | 2021-01-28 21:37
U Know Yunho၊ နောက်ဆက်တွဲသီချင်းဖြစ်သော “Eeny Meeny”တွင် Red Velvet Seulgiသည် MV တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
'Eeny Meeny' music videoသည် U Know Yunho သည် Red Velvet Seulgiနှင့်အတူ အချစ်အကြောင်းကို ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော performances နှင့် wittyဖြစ်သော မျက်နှာအသွင်အပြင်နှင့်အတူ ချစ်စဖွယ် ဇာတ်လမ်းသည် လူအများ အာရုံစိုက်နေကြသည်။U Know Yunho သည် ၂၉ ရက်တွင် KBS2 'Music Bank' မှစပြီး ၃၀ရက်နေ့တွင် MBC 'Show! Music
K-POP | Nang 기자 | 2021-01-27 20:15
BL ဒရမ်မာ “Color Rush” ၂၁ရက်နေ့တွင် ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးခဲ့သည်
StoryWiz (စီအီးအို Dae-jin Jeon) သည် ဝက်ဘ်စိတ်ကူးယဉ်အခြေခံထားသော အရင်းအမြစ်IP (ဉာဏ်ပညာမူပိုင်) ကို အသုံးပြုသည့် ပြည့်စုံသော ဗီဒီယိုစီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Blyth Competition BL အမျိုးအစားအပိုင်းတွင် ဆုရရှိခဲ့သော 'Color Rush' ကိုရွေးပြီး ဒရာမာဇာတ်ကားအဖြစ် ရွေးချယ်
ENT | MoMo 기자 | 2021-01-27 16:24